Run Hide Fight (2020) | MM Movie Store
ဒီတဈခါတော့ ပရိသတျတှအေကွိုကျတှစေ့မေယျ့ action and thriller ဇာတျလမျးလေးတဈပုဒျနဲ့မိတျဆကျပေးပါရစေ။ ဇီုအီဟာ အသကျ ၁၇ နှဈအရှယျ ကောငျမလေးတဈယောကျဖွဈပွီး အမြားနဲ့မတူ ဘောကျဆတျဆတျနိုငျတဲ့သူပါ။
သူနဲ့ သူ့ရဲ့ အခဈြဆုံးသူငယျခငျြး လူးဝဈဆိုတဲ့ ကောငျလေးတို့ဟာ ဗာနှနျအထကျကြောငျးက ကြောငျးသားတှပေဲဖွဈကွပါတယျ။အမရေိကနျအထကျကြောငျးတှရေဲ့ သဘာဝ ကပှဲတို့ ပြျောပှဲရှငျပှဲတို့ စတဲ့အထိမျးအမှတျပှဲတှေ မကွာခဏကငျြးပတာဟာသဘာဝပါပဲ ။
ဒီလို event တှထေဲမှာ Senior Prank ဆိုတဲ့ အစီအစဉျလေးအပါအ၀ငျပါပဲ။Senior Prank Day မှာ ကြောငျးသားတှအေားလုံး ဆရာဆရာမတှအေပါအ၀ငျ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျစကွနောကျကွပါတယျ။ဥပမာ- စာသငျခနျးတဈခနျးလုံး ပူပေါငျးတှအေပွညျ့ ထညျ့ခဲ့တာမြိုးပေါ့။
ဒါပမေယျ့ ဒီဇာတျလမျးထဲက ဗာနှနျအထကျတနျးကြောငျးသားတှရေဲ့ Prank Day ကတော့ ပြျောစရာမကောငျးခဲ့ပါဘူး။ စနောကျကွတဲ့ နကေို့ အသုံးခပြွီး ဆိုးသှမျးတဲ့ ကြောငျးသားတဈစုက ကြောငျးကနျတငျးကို လကျနကျတှနေဲ့ဝငျလာပွီး လူသတျ ခွိမျးခွောကျမှုတှလေုပျပါတော့တယျ ….
ဒါကို သိသှားတဲ့ ဇိုအီဟာ မသိသေးတဲ့ ကြောငျးသားတှကေို သတိပေးနိုငျအောငျ သူကိုယျတိုငျလညျး မသမာသူတှလေကျက လှတျအောငျ ကွိုးစားရပါတော့တယျ ….
ဒီတစ်ခါတော့ ပရိသတ်တွေအကြိုက်တွေ့စေမယ့် action and thriller ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ ဇီုအီဟာ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အများနဲ့မတူ ဘောက်ဆတ်ဆတ်နိုင်တဲ့သူပါ။
သူနဲ့ သူ့ရဲ့ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း လူးဝစ်ဆိုတဲ့ ကောင်လေးတို့ဟာ ဗာနွန်အထက်ကျောင်းက ကျောင်းသားတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။အမေရိကန်အထက်ကျောင်းတွေရဲ့ သဘာဝ ကပွဲတို့ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတို့ စတဲ့အထိမ်းအမှတ်ပွဲတွေ မကြာခဏကျင်းပတာဟာသဘာဝပါပဲ ။
ဒီလို event တွေထဲမှာ Senior Prank ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်လေးအပါအ၀င်ပါပဲ။Senior Prank Day မှာ ကျောင်းသားတွေအားလုံး ဆရာဆရာမတွေအပါအ၀င် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်စကြနောက်ကြပါတယ်။ဥပမာ- စာသင်ခန်းတစ်ခန်းလုံး ပူပေါင်းတွေအပြည့် ထည့်ခဲ့တာမျိုးပေါ့။
ဒါပေမယ့် ဒီဇာတ်လမ်းထဲက ဗာနွန်အထက်တန်းကျောင်းသားတွေရဲ့ Prank Day ကတော့ ပျော်စရာမကောင်းခဲ့ပါဘူး။ စနောက်ကြတဲ့ နေ့ကို အသုံးချပြီး ဆိုးသွမ်းတဲ့ ကျောင်းသားတစ်စုက ကျောင်းကန်တင်းကို လက်နက်တွေနဲ့ဝင်လာပြီး လူသတ် ခြိမ်းခြောက်မှုတွေလုပ်ပါတော့တယ် ….
ဒါကို သိသွားတဲ့ ဇိုအီဟာ မသိသေးတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို သတိပေးနိုင်အောင် သူကိုယ်တိုင်လည်း မသမာသူတွေလက်က လွတ်အောင် ကြိုးစားရပါတော့တယ် ….